Ciidanka dowladda oo Shacab ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay | SMC
Home WARARKA MAANTA Ciidanka dowladda oo Shacab ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay
Ciidanka dowladda oo Shacab ku dilay Muqdisho iyo Banaanbax ka dhashay
Dadweyne kasoo horjeedda Askari ka tirsan Ciidanka dowladda oo dad Shacab ah ku dilay Muqdisho ka dib markii Bandowga Muqdisho uu bilaabay ayaa banaanbax ka bilaabay qaar ka mid ah Isgoysyadda muqdisho.
Dilka ayaa loo geystay wiil dhalinyarada ah iyo dhaawaca qofka kale isgoyska Jubba Muqdisho.
Dadweyne Careysan ayaa taayaro ku gubay inta dhaxeysa Isgoyska Jubba iyo dugsiga Bartamaha ka dib markii ay sheegeen in Askariga uu si bareer ah u dilay Dadka Shacabka.
Ciidanka Booliska ayaa hada la tacaalaya joojinta Banaanbaxa, waxaana ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen Askarigii dilka geystay oo ku sugna barta koontaroolka ee Ciidamada Booliska ku hubiyaan gaadiidka.
Previous articleQaraxyo lagu weeraray Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada AMISOM
Next articleTaliyaha Ciidanka Asluubta oo Magacaabis sameeyey